जीवनमा खुसी हुन र व्यापार बढाउन गर्नुस यसो – साइन्स इन्फोटेक
नोभेम्बर 1, 2019 नोभेम्बर 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment खुसी, जीवन, व्यापार
जीवनमा खुसी हुन र व्यापार बढाउन गर्नुस यसो ! हजुर व्यवसायी हुनुहुन्छ । लाख काेसिस गर्दा समेत सफल हुन सक्नु भएको छैन भने आज मैले एउटा फार्मुला दिन गईरहेको छु । अपनाएर हेर्नुहोस् नसोचेको सफलता हात लाग्नेछ । मैले धेरै पटक अनुभव लिई सकेको छु ।
भनौं हजुर व्यापार त गर्नुभयो तर बिक्री छैन भनेपनि गार्हो हुन थाल्दछ । व्यापार बढोस भन्ने चाहना भएकाहरूले यसो गर्नुहोला । दैनिक व्यापार बढ्नुको साथै धनको बचत बढ्न गई जीवन सफल हुनेछ । घरमा शान्तिले बास गर्नेछ । लक्ष्मीको आगमन हुन थाल्नेछ ।
यो शुद्ध तान्त्रीक क्रिया हुनाले यसलाई गलत नसम्झनु होला । यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यो स्थानमा नहेर्नुहोला नत्र अर्थको अनर्थ हुनेछ । यो योगको कृपाले गरिब पनि धनी भएका छन् । यसको अर्को पक्ष भनेको कसैले व्यापारमा नजर लगाई दिएको छ भने पनि यसको प्रभावले हटाउदछ ।
प्रयोग गर्ने तरिका जानौं
१. शुक्ल पक्षको आइतबारबाट यो काम सुरू गर्नुहोस् । हरेक आइतबार दोहराउनु पर्नेछ । घर होस् या व्यापार स्थलको कुनामा गंगाजलले धुनुहोस् र हलेदोको स्वस्तिक बनाउनुहोस् र चनाको दाल र गुड राखेर छोड्नुस त्यहाँ फर्केर नहेर्नुस सफलताले हजुरको सुखका दिन सुरू हुनेछन् ।
← डीएनए भनेको के हो ? यो परिक्षण किन गरिन्छ ?
मन्त्रद्वारा खाना नपच्ने समस्याको उपचार →
One thought on “जीवनमा खुसी हुन र व्यापार बढाउन गर्नुस यसो”
Pingback: कामको खोजमा हुनुहुन्छ तर काम पाउनु भएको छैन भने यसो गर्नुस